Ameerika - ALinks
Maqaallada ku saabsan Ameerika
Si aad wax uga barato Kanada, waxaad u baahan doontaa inaad dalbato ruqsad waxbarasho oo Kanadiyaan ah, oo u shaqeysa sidii fiiso arday inta lagu jiro muddada aad joogto. Haddii koorsadaada ama barnaamijkaagu uu ka yar yahay lix bilood, uma baahnid a
Fiisooyinka dalxiiska waxaa la siiyaa booqdayaasha doonaya inay u safraan waddan dalxiis ama inay arkaan indhaha. Fiisooyinkaani waxay shaqeynayaan oo keliya waqti cayiman mana u oggolaanayaan soo-booqdaha shisheeye
Sidee loo helaa shaqo iyo shaqo chile.
Waxaa laga yaabaa 18, 2021 Karuna Chandna Chile, shaqo
Chile waxay leedahay ilo badan oo loogu talagalay maalgashadayaasha shisheeye iyo kuwii hore. Akhriso hageheena si aad waxbadan uga ogaato ka shaqeynta Chile. Waxay ka timid sida looga baxo ugaarsiga shaqada ilaa aadaabta shirkadda iyo canshuuraha. Waa inaad baxdo
Sidee loo helaa fiisada Mexico ee Talyaaniga? Tilmaame kooban
April 21, 2021 alinks Talyaaniga, Mexico, fiisada
Waxaad go'aansatay inaad booqato mid ka mid ah waddamada ugu caansan adduunka, Mexico! Waxaad si sax ah uweydiisan doontaa naftaada dukumiintiyada aad ubaahantahay: sida had iyo jeerba, wadamada ka baxsan Midowga Yurub, kaarka aqoonsiga maahan
Sidee loo codsadaa fiisada Mexico? Tilmaame kooban
April 6, 2021 Antika Kumari Mexico, fiisada
Qof kasta oo raba inuu u safro Mexico wuxuu leeyahay saddex ikhtiyaar oo uu ku dalbado fiiso. Fursadahaan waxay kuxiranyihiin: baasaboorkaaga, fiisooyinka kujira baasaboorkaaga, iyo ugu dambeynti degenaanshaha kale ee aad heysato. Saddexda ikhtiyaar in
Sidee loo codsadaa Visa-ka Kanada?
April 6, 2021 Shubham Sharma Canada, fiisada
Fiisada Kanada ayaa kuu oggolaaneysa inaad hesho rukhsad aad ugu safarto waddanka oo aad si joogto ah ugu noolaato muddo. Waxaad lahaan doontaa qaab aad ku dalban karto iyadoo kuxiran nooca fiisaha aad rabto. Waxaa jira a
Weelasha Fondue ee ugu Fiican
February 16, 2021 Antika Kumari USA, waxyaabo waxtar leh
Muddo dheer, Fondue wuu jiray waana fahmaynaa sababta. Jiis iyo shukulaato dhalaalay, way adag tahay in khalad la galo, gaar ahaan marka martida ama carruurta la madadaalinayo Qaabkeeda ugu fudud, dheriga fondue waa weel, sidoo kale a
4 Kuwa Sameeya Baastada Caanka Ah Oo Laga Heli Karo Dalka Mareykanka
February 15, 2021 Demi USA, waxyaabo waxtar leh
Baastada oo guriga lagu sameeyo waa howl aad loogu qanco. Waxaadna sameyn doontaa baastada macaan, spaghetti, ravioli ama baastada kale ee aad rabto. Baastada cusub waxay ka soo baxdaa qaab toosan oo qof walba u baran karo. Biyo, bur, iyo ukumo,
Waa maxay waqtiga ugu fiican ee booqashada USA?
February 8, 2021 Antika Kumari safarka, USA
Aynu baarno USA xilligeeda iyo xilligeeda ugu fiican !! USA waxay ku leedahay xilli kala duwan mid kasta oo ka mid ah gobolladeeda laakiin waqtiga ugu fiican ee lagu sahaminayo USA inta lagu jiro xilliga gu'ga oo u dhexeeya Maarso ilaa May.
1 2 3 ... 10 Xogta ku xiga»